ब्लुटुथ नाम कसरी राखियो ? यस्तो छ नाम भित्रको रमाईलो कथा - Technology Khabar
» ब्लुटुथ नाम कसरी राखियो ? यस्तो छ नाम भित्रको रमाईलो कथा
ब्लुटुथ नाम कसरी राखियो ? यस्तो छ नाम भित्रको रमाईलो कथा
यदि तपाईं स्मार्टफोन वा अन्य कुनै इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ब्लुटुथको नाम सुनेको हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू ब्लुटुथको सहयोगमा एक अर्कोसँग वायरलेस कनेक्ट हुन सक्छन्। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, ब्लुटुथले दुई उपकरणहरू जडान गरेर काम गर्दछ ।
तर के तपाईंलाई थाहा छ किन उपकरणलाई जोड्ने यस टेक्नोलोजीको नाम ब्लुटुथ राखियो भनेर। यदि थाहा छैन भने, आज हामी तपाईंलाई ब्लुटुथको पछाडिको रमाईलो कथा सुनाउने छौं।
ब्लुटुथ डेनमार्कको राजाको नाममा
ब्लुटुथको नाम पछाडिको कथा टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित नभएर राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। ब्लुटुथको नाम जिम कार्डाच (Jim Kardach) द्वारा नामाकरण गरिएको थियो, जो ब्लुटुथ निर्माण टोलीका सदस्य थिए उनी इन्टेलमा काम गर्दथे । यदि जिम कार्डाचलाई विश्वास गर्ने हो भने उसले ब्लुटुथको नाम १० औं शताब्दीका डेनमार्कका राजा हाराल्ड ब्लुटुथको नाममा लिएका थिए । इतिहासअनुसार त्यसबेला राजा हाराल्ड धेरै राज्यहरू जोड्नका लागि परिचित थिए। तिनले डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनलाई गाभेर एउटै राज्य स्क्यान्डिनेभिया बनाएका थिए । जसरी नेपालमा पृथ्वी नारायण शाहले बाइसे र चौबिसे राज्यहरुलाई एकिकरण गरेर नेपाल बनाएका थिए ।
यसरी राजा हाराल्डको नाममा ब्लुटुथ जोडियो
जसरी ब्लुटुथले इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू एक आपसमा कनेक्ट गर्ने काम गर्दछ, त्यस्तै किंग हाराल्ड ब्लुटुथले King Harald Bluetooth राज्यहरूलाई जोडेका थिए । यसै कारणले, जिम कार्डाचले यसलाई ब्लुटुथको नाम दिए ।
यद्यपि केही मानिसहरू भन्छन् कि राजा हाराल्डको नाममा ब्लुटुथ थपिनुको खास कारण भने फरक थियो किनभने राजा हाराल्डको एउटा दाँत पूर्णतया मृत थियो, जसको कारण यो निलो रंगको देखिन्थ्यो। यसले राजा हाराल्डको नाम पछाडि ब्लुटुथ थपिएको थियो । सोही अन्तिम नाम वा टाइटललाई जिम कार्डाचले टिपेर नयाँ प्रविधिको नाम राखेका थिए ।
के हो ब्लुटुथ
ब्लुटुथ बिनातार छोटो दुरिसम्म डाटा ट्रान्सफर गर्ने शिल्प विज्ञान हो । ब्लुटुथले छोटो दूरीको रेडियो वेब प्रयोग गरेर एक मोबाइलबाट अर्को मोबाइल वा एक डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा डाटा ट्रान्सफर गर्छ । ब्लुटुथलाई एरिक्सन नामक टेलिफोन बितरकले सन् १९९४ मा विकाश गरेको थियो । आजभोलि धेरै जसो मोबाइलमा यसको प्रयोग गरिन्छ र यो प्रविधि निक्कै प्रख्यात र उपयोगी पनि छ । ब्लुटुथ स्पेसल इनट्रेस्ट ग्रुपले ब्लुटुथलाई चलाउने गर्छ, कुनै पनि संस्थाले ब्लुटुथसँग आधारित सामान बनाउन ब्लुटुथका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ । एजेन्सीहरुका साथ
माइक्रोसफ्ट टिम्स एपका प्रयोगकर्ताहरु १४ करोड ५० लाख
एनसेलको युवालक्षित ‘सही यो ! पावर सिम’, विभिन्न सेवाहरु निशुल्क र डाटा बोनस पाईने